Chii chinonzi kunyora uye kuishandisa sei kugadzira zvimwe kutengesa | ECommerce nhau
Chii chinonzi kunyora uye kuishandisa sei kugadzira zvimwe kutengesa
Imwe yemazuva ano uye panguva imwechete mazwi anokwezva kana iwe uine eCommerce iri, pasina mubvunzo, iyo yekunyora. Iri risinganzwisisike uye panguva imwecheteyo izwi rinorova rinosanganisira nyanzvi uye nehunyanzvi hunotsvaga kugadzira zvinyorwa zvinotengesa. Asi chii chinonzi kunyora uye kuishandisa sei kugadzira zvimwe kutengesa?
Ndo zvaticha tsanangurira kwauri zvinotevera, kwete chete chii chinonzi kunyora, asiwo mashandisiro aungaita kuti uwane eCommerce yako kuti uwane zvimwe zvekutengesa zvezvigadzirwa uye / kana masevhisi aunotengesa. Iwe unoda kuziva kuti ungazviita sei?
1 Chii chinonzi kunyora
2 Kunyora kwagara kuripo
2.1 Kwainogona kushandiswa
3 Mashandisiro ekunyora kopi kugadzira zvimwe zvekutengesa
Chii chinonzi kunyora
Kuteedzera. Iri izwi rekunze, uye vazhinji vanofunga zvinoreva kuti kuva "kopi yekunyora", asi muchokwadi haisi. Izwi rinoturikirwa se redaction. Uye chaizvo zvinoreva chishandiso (kunyora) chakanangana nechinangwa chakati, chiri kutengesa. Ndezvipi zvinangwa zvaunogona kuzadzisa nazvo?
Unogona kukwezva vashandisi. Aya magwaro haana kunyatsoita seaya iwe aunowanzoona pamapeji ewebhu asi, kungave nekuda kwekurira kwavo (rangarira kuti kazhinji takaverenga nekududza mazwi mundangariro), kana nekuda kwekukanganisa kwavo zvirevo, kana zvimwe zvikonzero. , zvinoita kuti zvive zvinokwezva.
Unogona kugonesa vashandisi. Nekuti izvo zvinotsvaga nemavara aya kubatana nevashandisi, asi panguva imwechete kuwana mhedzisiro, kunyangwe ivo vakatenga chigadzirwa, siya email yavo kunyorera.
Ivo vanopa iko chaiko kwechigadzirwa kana sevhisi. Mune ino kesi, hairove ichitenderedza gwenzi, inokuudza nezvedambudziko rainaro (kubatanidza) uyezve inokupa mhinduro kuchinetso ichocho.
Kazhinji, kunyora kunyorera inzira nyowani kuSpain, asi inoshanda kwazvo. Muchokwadi, hukuru hukuru hwakasiya zvirimo (semuenzaniso, muna 1996 Bill Gates akatotaura kare kuti "zvemukati ndimambo"). Uye ndezvekuti, kunyangwe iwe uchifunga kuti mablog akatove kunze kwefashoni; kana kuti vanhu havachaverenge, chokwadi ndechekuti hachisi chokwadi. Asi havadi kuverenga magwaro akareruka uye asina hupenyu. Ivo vanoda kubatana navo, uye muCommerce, chimiro chemunyori anogona kuve izvo chaizvo zvinoita mutsauko.
Kunyora kwagara kuripo
Wakafunga here kuti ichi ndechimwe chinhu chakabuda senge chigadzirwa cheumwe munhu aripo? Zvakanaka hachisi chokwadi. Ichokwadi ndechekuti isu tiri kutaura nezve zano rave nesu kubvira 1891; chete haana kuzivikanwa nezita iro. Uye nei 1891? Nekuti raive gore iro August Oetker, wemishonga, akagadzira poda yekubheka, Backin. Ichi chigadzirwa chakave chakanyanya kurova, uye hachina kunyatsoita nekuti mbiriso yakabudirira, asi nekuti yaisanganisira mabikirwo mumapakeji ekupa vanhu mazano ekushandisa icho chigadzirwa. Uye iwo mamwe mabikirwo akaburitswawo mumapepanhau.
Uye kune mamwe mabikirwo akabudirira here? Ndizvozvo. Nekuti kana tikatarisa kumashure pane zvirimo, iko kunyora kwakashandiswa naOetker kwaive: une dambudziko, chigadzirwa, uye mhinduro nechigadzirwa icho. Chaizvoizvo, kubva pamuenzaniso iwoyo, kune akawanda akawanda, akadai seyeMichelin gwara, kana kunyange Netflix.
Kana iwe uchifunga kuti iko kunyora kunogona kungoshandiswa chete muCommerce, warasika kwazvo. Iko kukura kweiyi nzira ndeyekugonesa vashandisi kuti vaite chimwe chinhu chatinonyatsoda. Uye icho chimwe chinhu hachifanirwe kunge chiri chega uye chega chavanotenga, asi zvakare zvimwe zvinhu: izvo zvavanonyorera, izvo zvavanogovana, kuti vanotora chimwe chinhu ...
Naizvozvo, nzira dzaunogona kuishandisa dzakasiyana kwazvo:
Masocial network. Iyo nzira yekusvika kuruzhinji nekuvapa chimwe chinhu chinovatora. Semuenzaniso, kutaura nyaya dzinonakidza kuverenga; batanidza nevashandisi, kana kukwezva kutarisa nemagwaro mapfupi uye ane simba
ECommerce. Semuenzaniso, pane peji rekumba, uko mitsara mipfupi uye ine simba inogona kukanganisa uye panguva imwechete kukwezva vashandisi. Zvakare mumafaira echigadzirwa, ndichiita tsananguro dzadzo nenzira inoshanda (ndine ichi chigadzirwa chinogadzirisa dambudziko iri rauinaro).
Iyo "nezvangu" peji. Mumablog akawanda, angave ega kana bhizinesi, panogara paine peji rinotaura nyaya yemunhu kana kambani. Uye kunyangwe isiri iyo yekushanyirwa zvakanyanya, haifanire kuregeredzwa izvo. Muchokwadi, kana iko kunyora kuchishandiswa, avo vanoishanyira kuti vadzidze zvishoma nezvekuti ndiani ari kuseri kweiyo peji vanogona kupedzisira vagutsikana uye voiyedza.
Kumhara peji. Aya mapeji evhavha ari nyore kwazvo, uye anowanzove nechinangwa chimwe chakajeka: kutengesa. Pano peji rimwe chete rinoratidzwa kukwezva mushandisi uye kuti iye ane ruzivo rwese mune imwe nzvimbo. Asi iwe haugone kuizadza nemavara, uye kuti zvakare haina kukwezva. Ndokusaka kunyora kunoshanda kwazvo pavari.
Iwo mablog. Zvakanaka hongu, kunyangwe kunyora chinyorwa iwe unogona kuita kunyora. Muchokwadi, chinyorwa ichi chinogona kukodzera iyo tsananguro. Nekuti, kunyangwe isu tisiri kukutengesera chero chinhu, tiri kukutora nhanho nhanho kune chimwe chinhu chaunoda kuziva, kuchinetso (kusaziva) icho chatinogadzirisa nerugwaro.
Mashandisiro ekunyora kopi kugadzira zvimwe zvekutengesa
Uye zvino ngatipinde mune izvo iwe zvechokwadi zvaunoda kuziva: maitiro ekutengesa zvimwe nekukopa. Izvi zviri nyore kupindura, kunyangwe kana zvasvika pakuzviisa mune zvakanyanya kuoma kupfuura iwe zvaunofunga.
Kuteedzera kunogona kuburitsa maitiro kubva kune vashandisi, asi kana peji rako rewebhu, chigadzirwa ... zvikasasvika kwavari, kunyangwe hazvo hurefu hwemavara iwayo, mhedzisiro yacho haigoneke Chii chekuita ipapo?
Bheji pakuisa mari mukushambadzira. Muchokwadi, makambani ese anozviita sezvo iri nzira yekuti mabhizinesi asvike kune vateereri. Uye iwe unogona kushandisa iko kunyora pachako nemitsara mipfupi uye inokwezva kuti uwane iyo yekufona.
Zvinyorwa zvine copywriting pawebhusaiti yako. Isu tinokurudzira kuti iwe utarise yako webhusaiti kuti uchinje mavara anofinha kuita zvinyorwa zvekunyora. Semuenzaniso, fungidzira iwe une chitoro chemaruva. Uye kuti unoshuma zvigadzirwa zvako. Asi ko kana pachinzvimbo ichi ichitaura nyaya yemunhu anga achitsvaga chipo uye anga asina kumbomira kufunga kuti ruva hausi mufaro chete kuona, asi naro anogona kuratidza manzwiro?
Email kushambadzira. Email-yakatarisana nekunyora inogona kukubatsira iwe kutengesa zvimwe. Kana iwe uri mumwe wevaya vanotumira tsamba kune vanyoreri vashandisi uye vanotarisira maitiro akanaka nekutengesa kwepamusoro, izvi zvinogona kuwanikwa kana iwe ukaisa chinyorwa chinoita kuti vade kuverenga zvimwe, shanyira webhu kana hongu, tenga chigadzirwa. Uye izvi zvese zvinotanga nepfupi asi inokatyamadza nyaya. Semuenzaniso, uye ukaona paLinkedin: "Ndinokutengesa kuhanzvadzi yangu."
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEO » Chii chinonzi kunyora uye kuishandisa sei kugadzira zvimwe kutengesa
Vanofanira kunge vari sei uye / kana izvo zvinofanirwa kuverengerwa mumashizha echigadzirwa
Mhando dzeAdwords macampaign